Gunyana 2020 | Save A Train
Mwedzi: Gunyana 2020
musha > Gunyana 2020
Nguva yekuverenga: 7 maminitsi Zororo remhuri muEurope rinogona kunakidzwa kwazvo kuvabereki nevana veese mazera kana uchironga zvakanaka. Europe ndiyo nyika yemizinda uye mabhiriji, mapaki akasvibira akasvibira uye matura uko vasikana vadiki nevakomana vanogona kunyepedzera kuve madzimambo uye…
Nguva yekuverenga: 7 maminitsi Mamwe maonero akanaka kwazvo muEurope akakosha uye ari nyore kusvika. Kunyange zvakadaro, rwendo rwekuEurope runogona kudhura zvakanyanya kana ukasaronga pachine nguva. Nepo misoro mizhinji yeEurope inotambanudza bhajeti yako yekufamba, kune nzvimbo dzinoverengeka…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Maitiro eEurope uye nzvimbo dzepasirese dzakafemesa ngano. Iyo yakakura nyika ine musha kune anoshamisa makwikwi enzira anotungamira kune mamwe ezvishamiso zvinoshamisa zvepasirese. Mapako anoshamisa muHungary, Grand Canyon ine turquoise mvura muFrance, echando-dzimbahwe muAustria, uye…